★မြန်မာ့အလင်း★: အလွယ်ဆုံးမေးခွန်းနှင့် ဆရာကြီးများ
နှစ်သစ်အစမှာ တခြားဘာသာတွေက အပျော်အပါးတွေလုပ်ပါတယ်။ အလှုဒါနတွေလုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်…. အမုန်းအဃာတတွေရင်ထဲမှာ ပြည့်နှက်နေတဲ့ မိုဟာမက်တပည့်တွေကတော့ အများနဲ့မတူပါဘူး။ အထက်ကပုံမှာ January 18 , 2010 ရက်နေ့မှာ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ Church မီးရှို့ခံရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားဖူးတွေရှိနေတုံး Churchကို ၀ိုင်းပိတ်ပြီး လူတွေကို မီးလောင်တိုက်သွင်းခဲ့တာပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ၂၇ဦးသေဆုံးပြီး လူ ၃၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့ခံရတယ်ဆိုတော့ မသေခင်မှာ အရမ်းကိုနာကျင်ခံစားရမှာပေါ့။ ဒါဟာ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဆိုတော့ . . . အဲဒီခရစ်ယာန်တွေကို မီးရှိ့သတ်တာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောမယ်။ ဖြစ်နိုင်လား? အဲဒီခရစ်ယာန်တွေကို မီးရှိ့သတ်တာ ဟိန္ဒူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ ပြောမယ်။ ဖြစ်နိုင်လား? ခရစ်ယာန်တွေကို မီးရှို့သတ်တာ ဂျူးတွေက လုပ်တယ်လို့ပြောမယ်။ ဖြစ်နိုင်လား? ဘာသာမဲ့တွေက ခရစ်ယာန်တွေကို မီးရှို့သတ်တယ်လို့ပြောမယ်။ ဖြစ်နိုင်လား? ကျုပ်တို့တွေဟာ သတင်းကိုဖတ်စရာတောင် မလိုပါဘူး။ အဲလိုရက်ရက်စက်စက်နဲ့ တခြားဘာသာဝင်တွေကို သတ်ဖြတ်တာဟာ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ သိပြီးသားပါ။ (အပြည့်အစုံသိချင်ရင် Click လုပ်)
January 7,2010 အီဂျစ်မှာ Church ကိုအမည်မသိတဲ့ သေနတ်သမားတွေက ၀င်ပြီးပစ်ခတ်လို့ ခရစ်ယာန် ၇ ယောက်သေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသေနတ်သမားတွေက ဂျူးတွေဖြစ်နိုင်လား? (အဖြေကိုတော့ သိပြီးသားပါ။ အသေးစိတ်ဖတ်လိုရင်င်ဒီမှာ Click လုပ်)
January 10 ,2010 မလေးရှားမှာ Church ၃ခုကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကလုပ်တာလား? (အဖြေကိုတော့ သိပြီးသားပါ။ အသေးစိတ်ဖတ်လိုရင်င်ဒီမှာ Click လုပ်)
January 11 ,2010 Algeria မှာ Church ကိုဖေါက်ထွင်းပြီး လုရက်ကာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဟိန္ဒူကလုပ်မလား? (အဖြေကိုတော့ သိပြီးသားပါ။ အသေးစိတ်ဖတ်လိုရင်င်ဒီမှာ Click လုပ်)
နှစ်ဦးရဲ့ အစပိုင်းမှာ လူတွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဲ့တာ စစ်အစိုးရတွေလား? ဒီမိုအစိုးရတွေလား? ကွန်မြူနစ်အစိုးရတွေလား? ဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်တွေလား? ဟိန္ဒူအစွန်းရောက်တွေလား? ခရစ်ယာန်အစွန်းရောက်တွေလား? ကဲဗျာ.. မိမိဖာသာဖြေကြည့်ပါ။ အဖြေကတော့ လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးမှာ မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်မှန်သမျှ ပတ်သက်နေတာ မွတ်ဆလင်ပါပဲ။ ကျုပ်တို့တွေဟာ ဒီမို-နအဖ-တတိယလူ- ကွန်မြူနစ် - ရှမ်း - ကရင် - ဗမာ - ကချင်- ပလောင် - ပအို့ - မွန် - ရခိုင် စသဖြင့် လူမျိုးရေး, နိုင်ငံရေးဝါဒ မတူတဲ့သူတွေအကြား ခွဲခြားဆက်ဆံတာကိုတော့ လက်ခံနေပါတယ်။ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းပြီး ဆဲဆိုတာတွေ.... အပြစ်မြင်တာတွေကိုလဲ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မွတ်ဆလင်တွေ အပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံရင်တော့ လူဆိုးလူကောင်းနေရာတိုင်းမှာ ရှိတယ်လို့ ဆုံးမသူတွေရှိကြပါတယ်။ အဲလိုဆုံးမသူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်က ရယ်စရာမကောင်းဘူးလား?
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 12:23 PM
စအိုမဒိမ်းကျင့်ခံထားရတဲ့ ကျွန်ကုလား satan
စစ်အစိုးရက သူ့အဏာကို ကာကွယ်ရင်း ၈၈ မှာသတ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ .. မွတ်ဆလင်စစ်တပ်ကြီးက ဘာသာရေးနယ်ချဲ့ဖို့ မင်းတို့အဖွားစအိုကို မုဒိမ်းကျင့်ပြီး အဖိုးကိုခြေဖြတ်လက်ဖြတ် ကိစ္စ ၂ခုကို နှိုင်းယှဉ်ပေးပါ။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အမည်ခံထားတဲ့ ခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိတဲ့ မိုဟာမက်တစ်ကောင် ဂျူးတွေကို အမျိုးဖြုတ်လို့ သေတဲ့ဦးရေနဲ့ စက်တင်ဘာအရေးခင်းမှာ သေတဲ့ဦးရေ ဘယ်သူကပိုများသလဲ? စစ်အစိုးရမှာ ဒီမိုသမားတွေကို တွေ့တဲ့နေရာမှာ သတ်ပြစ်ပါလို့ မညွှန်ကြားပါဘူး။ စစ်အစိုးရက ဒီမိုမလေးတွေကို မုဒိမ်းကျင့်ခွင့်ရှိတယ်လို့ မထုတ်ပြန်ပါဘူး။ Quran ကျမ်းမှာ မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကို သတ်ရမယ်လို့ သင်ကြားတယ်။ မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ကောင်မလေးတွေကို မုဒိမ်းကျင့်ခွင့်ရှိတယ်ရေးထားတယ်။ အဲဒါဆိုရင် စစ်အစိုးရနဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ ဘယ်ဟာကို ဦးစားပေးတိုက်ထုတ်သင့်လဲ? ကျွန်ကုလား..ဖြေစမ်း
ဘာသာတိုင်းမှာ လူဆိုးရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ ထူးခြားတာက မုဒိမ်းကျင့်လူသတ်တဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်… ချေးစားခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိတဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတာ လောကမှာ မိုဟာမက်တစ်ကောင်သာရှိပေ၏။ မွတ်ဆလင်ဘာသာမှာ သူတော်ကောင်းအားလုံးသည် ဖိနပ်ချေးသုတ်ပြီး ပါးပိတ်ရိုက်ခံရမည့်သူများသာဖြစ်ပေသည်။ ထိုဟာသည် မွတ်ဆလင်၏ ထူခြားချက်ပေတည်း။
စကားမစပ် ဘယ်လိုလဲ? ပိတောက်မြေမှာ Maung နဲ့ Astrologer အိုင်ဒီသုံးပြီး ဒို့မြန်မာတွေကို သွေးခွဲတာအဆင်မပြေလို့ ငါတို့ဘလော့ဘက်ကို လှည့်လာတာလား? ဟဲဟဲ.. ကျွန်ကုလားကို နှိပ်ကွပ်ရေး ပါဂူကြီးဆီလာတယ်ဆိုတော့… တတ်သည့်ပညာ မနေသာဆိုသလို လုပ်ပေးရတော့မှာပေါ့ကွာ။ ၀ါးဟားဟား